လြှပျစစျမီးအလုပ်လုပ်ဆောက်လုပ်ရေးစီးပွားရေးလိုင်းလေလံလခြမ်း Banda-ရလဒ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
27 / 08 / 2019 Levent Elmastaş လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ 0
လခြမ်း bandirma လိုင်းလြှပျစစျမီးနု၏ရလဒ် yapimi ဖြစ်ပါတယ်
Hilal Banda-လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: မှာလည်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပင် Gediz တံတားများ၏မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းအပေါ်အားဖြည့်ကွန်ကရစ်၏သက်တမ်းတိုးပြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာလိုင်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနူးညံ့သောရလာဒ်များထူထောင်တွေ့ရှိခဲ့: 70 + 355 '' 73 + 315 လည်း Nifu တံတားနှင့်မိုင်အကွာအဝေးကိုတွေ့ ''
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး3။ Hilal Banda-လိုင်းမိုင်အကွာအဝေးလျင် 2019 န်းကျင်ဒေသဆိုင်ရာယ်ယူခြင်းစတော့အိတ် Ctrl + ညွှန်ကြားမှု (TCDD) 307944 / 1.610.686,16 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်ကုန်ကျစရိတ်: ကိုလည်း Gediz တံတားများ၏မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းအပေါ်အားဖြည့်ကွန်ကရစ်၏သက်တမ်းတိုးပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့: 70 + 355 '' 73 + 315 လည်း Nifu တံတားနှင့်မိုင်အကွာအဝေးကိုတွေ့ '' ညီလာခံ41.355.161,00 အလုပ်အကိုင်အဖို့ကုမ္ပဏီကတင်ဒါကမ်းလှမ်းမှုကိုအားပေးတော်မူပြီနဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်£ဆင်ဟွာ CEM TEXT စာချုပ်အဆိုပြုချက်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာ Facility အတွက်လိုင်းများလြှပျစစျမီး။ နုလေလံပါဝင် 1 ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
နူးညံ့သော, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အသစ်သောမီးရထားလိုင်းဖြတ်တောက်မှု၏ 2,5 ကီလိုမီတာတည်ထောင်စေနှင့်အဟောင်းလိုင်းလြှပျစစျမီးအဆောက်အအလုပ်အကိုင်များ၏ရွှေ့ပြောင်းခံရပါဝင်သည်။ ပေးပို့အလုပ် 365 ထံမှကြာချိန် (သုံးရာခြောက်ဆယ့်ငါးဖြစ်ပါသည်) ပြက္ခဒိန်ရက်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Banda-လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktırအတွက် Hilal 07 / 06 / 2018 Banda-လခြမ်း TC STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3၏Yaptırılacaktırအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးအတွက်လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအလုပ်လုပ်။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး Crescent-BANDIRMA လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: ကိုလည်း Gediz တံတား 70 အမှတ်များ၏မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းအပေါ်အားဖြည့်ကွန်ကရစ်၏သက်တမ်းတိုးပြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာလိုင်းအတွက်အလုပ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အား Facility တည်ထောင်တွေ့ရှိခဲ့: 355 + 73 '' 315 + 4734 လည်း Nifu တံတားနှင့်မိုင်အကွာအဝေးကိုတွေ့ '' အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေ 19 သည်နှင့်အညီအပိုဒ်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 283036 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI 121 / ALSANCAK KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ် ...
တင်ဒါရလဒ်များ၏ Banda-လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အား်ဆောင်မှုများတည်ထောင်အတွက် Hilal 25 / 07 / 2019 Hilal Banda-လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: 70 + 355 Nifu ၏တံတားထိုအမိုင်အကွာအဝေးမှာတွေ့ရှိ: 73 + 315တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး3၏စီးပွားရေးတင်ဒါရလဒ်များ၏သက်ဆိုင်ရာလိုင်း Facility တည်ထောင်အတွက်လျှပ်စစ်မီးများအားဖြည့်ကွန်ကရစ်သက်တမ်းတိုး၏စဉ်းစားရန်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပြီးနောက်၏ Gediz တံတားများတွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒေသဆိုင်ရာယ်ယူခြင်းနှင့် Inventory Control ကိုဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2019 / 307944 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 1.280.951,68 TL နှင့်ကုန်ကျစရိတ်မိုင်အကွာအဝေးနှုန်း 1.610.686,16 နှင့်အတူလခြမ်း-သို့ကျဆင်းလာလိုင်းခဲ့: 70 + 355 '' Dee Nifu ၏တံတားထိုအမိုင်အကွာအဝေးကိုတွေ့ရှိခဲ့: 73 + 315'' သမင်တွေ့ သက်ဆိုင်ရာလိုင်းအတွက်အားဖြည့်ကွန်ကရစ် Gediz တံတားစီးပွားရေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အား်ဆောင်မှုများတည်ထောင်နူးညံ့သောကမ်းလှမ်းမှုကို၏သက်တမ်းတိုးပေးဖို့ယင်းနောက်စဉ်းစားမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းအပြီးသတ်နှင့်ကုမ္ပဏီ4အကျိုးဆက်များ unintended ခဲ့ပါတယ် ...
Çanakkale-BandırmaBandırmaပြည်နယ်လမ်းမကြီး Interchange Entry နဲ့ Access ကိုလမ်းများဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်များ 10 / 04 / 2018 Çanakkale-Bandırmaပြည်နယ်လမ်းမကြီး Banda-Access ကို Interchange နှင့် 14 / 2018 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 94202 TL နှင့် 61.311.824,03 TL Çanakkale-Bandırmaပြည်နယ်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. အဝေးပြေး၏အဝေးပြေးဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု-xnumx.bölg Bursa အခြားအထူးဘတ်ဂျက် Institution များညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ၏ Access ကိုလမ်းများဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်များ Banda-Access ကိုလမ်းမ Interchange နှင့် Access ကိုလမ်းများဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်နူးညံ့ချက်ပြုတ်နု 86.074.809,78 တစ်ခုတည်းကုမ္ပဏီ 38 DOĞUSANတည်ဆောက်နေ CO နှုန်းအဖြစ်လေလံဆွဲလို့မရပါဘူး။ Inc က ကုမ္ပဏီရရှိထားပြီးပါပြီ။ နုလေလံပါဝင် 62.968.650,00 ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ 112အရေအတွက်ပမာဏ 3952မီတာ + မီတာရှည်လျား viaduct စာချုပ်ချုပ်ဆို။ တံတား၏အရှည် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မြေပေါ်Yaptırılacaktır (လခြမ်း -Bank အဆိုပါလိုင်း) 13 / 06 / 2016 သံသယမြေပေါ် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3၏လိမ့်မယ်သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာအောင်အခါ။ LINE KM အပေါ် REGION အစစ်အမှန်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးHİLAL -Bank: အလုပ် 239 အမှတ်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 798 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ဘယျအရာဆောက်လုပ်ရေး PLACE သို့အဝေးပြေးလမ်းမြေပေါ် IN 4734 အဆင့် Cross တှငျတှေ့ 19 + ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 202441 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI 121 / ALSANCAK KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2324640928 - 2324640928 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: က c) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာကဒီမှာမြင်နိုင်ပါသည်: https: / တစ်ဦး) ၏နူးညံ့မှ 2-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ် /ekap.kik.gov.tr/ekap/ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Hilal-Banda-လိုင်းကီလိုမီတာ: တံတား၏ 70 355 + ပြန်လည်မွမ်းမံခုနှစ်တွင် Nifu တွေ့ရှိခဲ့ 26 / 07 / 2017 Hilal-Banda-လိုင်းကီလိုမီတာ: တံတား၏ 70 355 + ပြန်လည်မွမ်းမံခုနှစ်တွင် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3၏ Nifu TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ REGION ယိမျးမယိုညွှန်ကြားရေးမှူး Hilal-Banda-လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: 70 + 355 Nifu တံတားမှာတွေ့ရှိအားဖြည့်ကွန်ကရစ်သက်တမ်းတိုးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်များ၏စဉ်းစားရန်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 356017 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI 121 / ALSANCAK KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2324640928 - 2324640928 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: က c) ကိုအင်တာနက်တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Banda-လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktırအတွက် Hilal
တင်ဒါရလဒ်များ၏ Banda-လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အား်ဆောင်မှုများတည်ထောင်အတွက် Hilal
Çanakkale-BandırmaBandırmaပြည်နယ်လမ်းမကြီး Interchange Entry နဲ့ Access ကိုလမ်းများဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်များ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မြေပေါ်Yaptırılacaktır (လခြမ်း -Bank အဆိုပါလိုင်း)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Hilal-Banda-လိုင်းကီလိုမီတာ: တံတား၏ 70 355 + ပြန်လည်မွမ်းမံခုနှစ်တွင် Nifu တွေ့ရှိခဲ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Hilal-Banda-လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: Gediz တံတားYaptırılacaktırအတွက် 73 315 +
Bandirma - Balikesir - Manisa - Menemen လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်းတင်ဒါအပင်:
TCDD3။ နုကမ်းလှမ်းမှုကို၏ဧရိယာ Hilal-Banda-ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်မှုစုဆောင်းခဲ့ကြ